I-Sony Best 8 I-Sony Phones Yokuthenga ngo-2018
Ukuthenga Iziqondiso Ama-smartphone
by UDavid Beren
Bheka izinketho zethu eziyizintandokazi ezivela ku-Sony's popularity lineup
Njengomunye wabakhiqizi be-elekthronikhi abaziwayo kakhulu emhlabeni, i-Sony ithathwa kahle ngokuthuthuka kwayo kwezobuchwepheshe. Lezi zintuthuko, ezinkulu noma ezincane, zivame ukuthola indlela yazo ekuhambeni kwe-smartphone yenkampani futhi yizindaba ezinhle kumakhasimende akwa-Sony. Yiqiniso, i-Sony kungenzeka ukuthi ayinaso isabelo samakethe Samsung noma i-Apple, kodwa namanje amafoni aphezulu ahlinzeka izithombe ezingavamile zomsindo nezithombe zomhlaba, empeleni engumgogodla we-flagship Xperia. Ngakho-ke noma ngabe ufuna ikhamera engcono kakhulu, ibhethri, inani noma ukhetho oluningi kakhulu, bheka ngezansi ukuze uthole ama-smartphone angcono kakhulu we-Sony ukuthenga namhlanje.
Abathengi be-smartphone bafuna ukubamba i-Sony engcono kakhulu okufanele banikele kufanele babheke i-Xperia XZ Premium kanye nesinqumo sayo sokuboniswa kwe-4K esibheke iso. Ukukhuliswa ngokusebenza okungamaphesenti angu-50 ngokushesha futhi amaphesenti angama-25 abushelelezi kunezizukulwane zangaphambilini ze-Snapdragon (futhi zihlanganiswe ne-4GB ye-RAM), i-SZ Premium ifakwe ukusebenza kumanethiwekhi we-LTE we-GSM othwala. Noma ngabe iyiphi inethiwekhi oyikhethayo, i-SZ Premium ineza ezinye izinto eziphawulekayo, kuhlanganise ne-4x4 MIMO (okufakwayo okuningi, okukhipha okuningi) ne-LTE Cat16 yokulanda izinhlelo zokusebenza ngezikhathi ezintathu ngaphambi kokusheshisa kwe-hardware. Ngaphakathi kwe-SZ Premium ingu-64GB yememori yangaphakathi enwetshiwe kuze kube ngu-256GB, ngenxa yendawo ekhona ye-microSD ikhadi. Engeza ekwakhiweni okumangalisayo nokubukwa kwesilazi emuva kwepaneli, ikhamera ye-megapixel engu-19 engakwazi ukuthatha ividiyo engu-960fps ehamba kancane kancane nezipikha ezibhekene naso ezibheke phansi komncintiswano futhi unomshini ohle kakhulu oseduze nxazonke.
Ukufuna i-slot ephezulu ekuxhumaneni kwe-smartphone ye-smartphone kungenye i-contender eqinile, i-Sony Xperia XZs. Kutholakale kuvuliwe ukuze kusetshenziswe abathwali be-GSM LTE e-US, ama-XZ aneza isisindo somfanekiso wesithombe se-Motion Eye se-19-megapixel enamandla kakhulu sokubamba izithombe ngokuphindwe kasikhombisa ngenkathi engeza ukuthuthwa kwevidiyo ye-960fps ehamba kancane. Ukubonisa kwe-Full HD 1080p ye-5.2-intshi ye-TRILUMINOUS kuhlanganisa i-Gorilla Glass 4 enamandla ukuze ivikeleke ngokwengeziwe ngokumelene nama-bumps noma amaconsi namabhulodi kanye nephaneli ye-metal ephothiweyo ye-hardware ehlala isikhathi eside. Ngaphakathi kwe-Xperia XZs ingu-64GB yememori e-inboard engakwazi ukungeza ku-256GB eyengeziwe yendawo yokugcina nge-microSD. I-Snapdragon 820 inikeza i-LTE Cat 9 ukwesekwa kokulandwa okusheshayo kokulayisha nokulayishwa kanye nokuhlinzeka ngokusebenzayo kwansuku zonke kwedivayisi. Ibhethri engu-2,900 mAh ivumela ukusetshenziswa kwansuku zonke, futhi uma udinga ukuhlunga, kukhona ukushaja okuguquguqukayo kwe-Qnovo kanye ne-Qualcomm Quick Charge 3.0 yama-recharges okusheshayo.
Uma ukugcina i-smartphone kubiza phansi ngaphandle kokudela isitayela noma umsebenzi kubalulekile, i-Sony Xperia L1 iyisinqumo esinengqondo. Isebenza ngama-carrier we-GSM asekelwe e-US, i-L1 ineza ukwesekwa kwamaqembu we-LTE asebenzisana ne-T-Mobile, AT & T, i-Straight Talk, i-MetroPCS ne-CricketWireless. I-5.5-intshi 720p HD ifaka cishe ekugcineni-onqenqemeni kuma-bezels ohlangothini wesikhala esivelayo esibonakalayo, esikhuluma ngokuklama okugcwele kwe-hardware ehambisana kahle esandleni sakho. Ibhethri engu-2,620 mAh engasusiwe isiza ukugcina ikhamera ye-megapixel engu-13 ihamba nge-af / 2.2 ukuvula kanye ne-xLoud ClearAudio + yokuthola ividiyo. Ngaphansi kwe-hood ngu-2GB ye-RAM yokusebenzisa izinhlelo eziningi ngesikhathi esisodwa, kanye ne-16GB yememori yangaphakathi kanye nesitoreji se-microSD sokwandisa isikhala sesitoreji.
I-Sony Xperia XA2 inesiboniso esingu-5.2-intshi, onqenqemeni lwe-1080p ne-Gorilla Glass. Emuva kwedivaysi ikhamera enkulu ye-megapixel enomshini wesithombe weselula we-1 / 2.3-inch Exmor yesithombe esithwebula izithombe ezingu-24mm ububanzi obubanzi nokuqopha kwevidiyo engu-4K kanye nevidiyo engu-120fps ehamba kancane. Ikhamera ebhekene ne-megapixel ebheke phambili inikeza inzwa efanayo efanayo ne-lens 120-degree wide-angle angle yokubamba izithombe ezibanzi zama-landscape kunangaphambili. Ukuqeda zonke ezinye izici kuyi-Processor Snapdragon 630, inzwa yomsindo njalo, i-3 300 mAh yebhethri yokuphila kwebhethri yosuku lonke kanye nesofthiwe ye-Android 8.0.
Amandla ka-Sony emakethe yezithombe eziphathekayo akumangazi ukuthi bakwazi ukuthola ubuchwepheshe obunjalo kuma-smartphones abo. I-Xperia X inekhamera enkulu yama-megapixel engu-23 enikwe amandla yi-Sony's Exmor RS yesithombe senzwa yeselula ehambisa ikhamera ngaphansi kwamasekhondi angu-0.6. Le sensor inezela futhi i-autofocus ye-hybrid esebenza ukuqeda imiphumela ecacile yesithombe esibangelwa izifundo ezihamba ngokushesha. Ikhamera ebheke phambili ibonakala ngokuphawulekayo njengoba izibopho zayo ezingu-12-megapixel zisebenza kanye ne-lens-angle engama-22mm yokubamba izindawo ezinkulu (futhi ngokuvamile zenza umsebenzi ongcono kunamakhamera angemuva wemikhiqizo yokuncintisana). Ukuboniswa kwe-X engama-intshi we-X uzizwa ukhululekile esandleni, ngenxa yesithombeni esithambile eseza inhlanganisela enhle yokuqina nokududuza. Izithombe nezithombe ezithunjiwe zigcinwe kwimemori engu-32GB embukisweni, kanti i-200GB yesitoreji esengeziwe ingezwa nge-microSD.
I-Sony Xperia XA2 Ultra inebhethri engu-3,580 mAh ehlala isikhathi eside ehlanganisa ukulungiswa kwesofthiwe ukugcina okungenani amahora angu-48 ngaphandle kokushaja, okuyinto yokwamukelwa kwe-smartphone evelele kakade. I-XA2 inesiboniso se-HD esinqunyiwe-onqenqemeni esiyingqayizivele ye-movie noma ukubukwa kwe-TV ngenkathi kuhamba. Ikhamera ye-megapixel engama-23 ifakwe nesilawuli se-Sony Exmor RS nesithomitha esingu-24mm ububanzi be-F2.0 engakwazi ukuqoshwa kwevidiyo engu-4K nokudubula ividiyo engu-120 ehamba kancane. Umshayeli we-megapixel obhekene no-16 uneza ukukhanya kwe-selfie ehlakaniphile kanye ne-lens 120-degree-angle angle ukuze ukwanelise izithombe ze-selfie, kuyilapho ukurekhoda kwevidiyo kuzuza ku-Sony's SmartAmp ubuchwepheshe bemisindo ejulile xaxa ngesikhathi sokudlala.
Ngesizathu esisodwa noma esinye, i-smartphone ngayinye ku-Sony's lineup ibheka ukwenza uphawu lwayo ngenye indlela, kodwa yi-Sony Xperia XZ1 ehlasela i-homerun kusigaba somsindo. Udunyiswa njengenye yezinsiza eziqine kakhulu ku-Sony lineup ene-flagship-quality specs, i-XZ1 ineza ukubonisa okugcwele kwe-HDR TRILUMINOUS engu-5.2 intshi, i-Gorilla Glass 5, ikhamera yangemuva engama-megapixel engu-19 ne-Motion Eye system kanye ne-hybrid autofocus yokubikezela okusheshayo- umlilo waqhuma izikhwama ngaphandle kokufiphaza. Akungabazeki emaphepheni ama-specs we-XZ1 ama-hardware specs ahlaba umxhwele jikelele, kodwa yiwona owona wonke umhlaba we-SmartAmp no-S-Force ngaphambili umsindo ohamba phambili lapho idivayisi ikhanya khona ngempela. Ngeza amakhono okulalelwayo aphezulu okuxazulula nge-DSEE-HX ne-LDAC, ukukhanselwa komsindo wedijithali kanye ne-XZ1 ngokushesha iba umculo wamandla nombukiso we-movie. Ishicilelwe nge-Android 8.0, i-XZ1 ivuliwe futhi i-LTE inikwe amandla kunethiwekhi ye-GSM yenethiwekhi ye-LTE.
Ngokubhekwa njengenye ye-Smartphones ye-flagship-level level kwi-Android yonke, lokho i-XZ1 engekho usayizi weskrini okungaphezulu kunokwenza kube khona. Ine-4.6 intshi ye-HD ye-TRILUMINOUS ebonisa ukuthi ama-pair ngokugcwele engaphakathi kwensimbi futhi enamathele kahle entendeni yesandla sakho. Ikhamera ye-19-megapixel engemuva inezela uhlelo lwe-hybrid autofocus lwe-Sony elungile lokubamba izifundo ezihamba ngokushesha ngaphandle kokungafuneki, ngenkathi ikhamera ebheka phambili phambi kwe-megapixel ivumela ukusebenza ngokudubula ngokuzenzekelayo uma ufuna ukuthola i-selfie ephelele. Iphinde iphakwe nge-Sony's SmartAmp nezipikha ze-stereo zomsindo we-res. Ibhethri engu-2,700 mAh ifakwe ukushaja okuguquguqukayo kwe-Qnovo ne-Qualcomm Quick Charge 3.0 ye-USB-C ukushaja okufaka amahora wokuphila kwebhethri ngesikhathi sokuchitha isikhathi nje.
Inqubomgomo Yokuzulazula Engenantambo Ye-Verizon
I-America's Choice 65 Plus I-Senior Cell Phone Verizon Plan
I-8 Best Huawei Phones Ukuthenga ngo-2018
Ngakanani i-iPhone 4 Izindleko?
I-iPhone vs. iPod Touch Reviews
I-Samsung A Amafoni: Okudingeka Ukwazi
I-8 Best Imfono ye-Motorola Yokuthenga ngo-2018
Yikuphi i-iPhone (noma i-iPod) Okuthenga Wonke umuntu ohlwini lwakho
Izizathu ezimbili zokushintshela e-Verizon iPhone
Izikhulumi ezingu-7 ze-Best Klipsch zokuthenga ngo-2018
Mayelana ne-World of Tanks PC Game
Ukuthinta okuvamile kwe-Android kwefoni yakho noma ithebhulethi
I-ID yocingo ichazwe
I-Buddy Chat manje iyingxoxo yeqembu ku-AIM
Ama-Cameras Ahamba phambili Ahamba phambili angu-8 athengwa ngo-2018 we-Under $ 500
Amathiphu aphezulu kakhulu adumile we-Gmail, ama-Tricks namaTutorials
Ukubetha I-Notepad Yakha Iwebhu Yekhasi nge-CSS
Isiqondiso: Indlela yokusebenzisa i-Apple Watch
Emuva phezulu noma Hambisa Imininingwane Yakho Yoxhumana nabo noma Ikheli Lekheli
PhoenixBIOS Beep Code Ukuxazulula izinkinga
Indlela Yokugqamisa Umbhalo ku-Windows Mail noma ku-Outlook Express
Ukuvakasha Okubonakalayo Kwezinsiza Ezisetshenziselwe AM, FM, Satellite, ne-Inthanethi
Ukubukezwa kwe-All-in-One Printer Review
Amakhohlisi Nezimfihlo Ze-Crash Bandicoot ku-PS1
I-NetSpot: Tom's Mac Software Pick
Abaculi be-Fitness abane-Best Battery Life
10 Free Driver Updater Amathuluzi
Indlela Yokurekhoda I-Voicemail Ukubingelela ku-iPhone
Indlela Amakhompiyutha Ekhompyutheni Azuza Ngcono Kwenu